SMS ဖြင့် ‘အပင်း’သွင်းခြင်းကို လက်တွေ့သရုပ်ပြ
ဟန်းဖုန်းများမှ ပေးပို့သော SMS ကိုအသုံးပြု၍ ယင်း SMS လက်ခံရရှိသော ဟန်းဖုန်း အား တစ်ချိန်ချိန်တွင် မိမိလိုသလို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်စေခိုင်းနိုင်ရန် ကွန်ပျူတာပရို ဂရမ်ငယ်တစ်ခုအား ‘အပင်း’သွင်းခြင်း သရုပ်ပြမှုကို ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင်ကျင်းပသော သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးသရုပ်ပြပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည့် Shmoocon 2011 တွင် သုတေသီ ဂျော်ဂျီယာဝေးဒ်မင်းက လက်တွေ့သရုပ်ပြသခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ‘အပင်း’သွင်းခြင်း ခံထားရသော ဟန်းဖုန်းများက ‘အပင်း’ သွင်းသူက အဝေးမှထိန်းချုပ်စေခိုင်းနိုင်ပြီး အင်တာနက်ဆာဗာတစ်ခုခုအား ‘အပင်း’ သွင်းခြင်းခံထားရသော ဟန်းဖုန်းတစ်သိန်းခန့်က တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆက်သွယ်ကြ စေရန် အမိန့်ပေးခြင်းသည် ဆာဗာများအတွက် စိုးရိမ်ရဖွယ်ရာ အချက်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ iPhone, HTC အစရှိသည့် အဆင့်မြင့်ဟန်းဖုန်းများကို ကိုင်ဆောင်သူများပြားလာပြီ ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ ယင်းတို့ကို ကွန်ပျူတာများသဖွယ် အမြတ်ထုတ်အသုံးချသူများ မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်လာတော့မည် ဆိုသည်ကို ဝေးဒ်မင်းက လက်တွေ့သရုပ်ပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
Posted by patheinphonemarket at 6:25 PM No comments:
iPhone5အား Apple မှ စတင်ထုတ်လုပ်နေပြီဟု သတင်းများထွက်ပေါ်
(ပုံ) iPhone5အား ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးက စိတ်ကူးပုံဖော် ရေးဆွဲထားပုံ
ဂျပန်မှလာသော သတင်းများအရ Apple ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယင်းတို့၏ နောက်ထွက်ရှိမည့် iPhone မျိုးဆက်ဖြစ်သည့် iPhone5အား ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဟု သိရှိရသည်။
Apple ပစ္စည်းများအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြသည့် blog တစ်ခုဖြစ်သည့် ဂျပန်အခြေစိုက် Macotakara blog ၏ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာ အဆက်အသွယ်များက Apple နှင့် ဖက်စပ်ပြုလုပ်နေသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် iPhone5ထုတ်လုပ်မှုအား အင်တိုက်အားတိုက် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပြီး လာမည့်လအတွင်း အလုံးအရင်းနှင့် သိုလှောင်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ တရုတ်အဆက်အသွယ်များသည် ပြီးခဲ့သည့် ဂျန်နဝါရီလက iPad3ထွက်ရှိမည်ဟု ၂ လ ကြိုတင် သတင်းပေးခဲ့ဖူးသည်။
ယင်းသတင်းအရ Apple အနေဖြင့် iPhone5အား အများမျှော်လင့်ထားသည်ထက် စောလျင်ကာ သြဂတ်စ်လအတွင်းတွင် ထုတ်ဖော်ပြသဖွယ်ရှိသည်ဟု သိရရသည်။
သို့သော်လည်း၊ ယင်းကိစ္စဖြစ်နိုင်ချေမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး မူရင်းအချိန် အပိုင်းအခြားဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာ (သို့) အောက်တိုဘာလ အတွင်း၌သာ ထုတ်ဖော်ပြသသွားဖွယ်ရှိသည။်
iPhone5သည် ပိုမိုခိုင်ခံလှပသော ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း၊ ပို၍ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်နှင့် စွမ်းအားမြင့် processor တို့ ပါဝင်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
Posted by patheinphonemarket at 6:22 PM No comments:
စတီးသေတ္တာ ချိတ်ပိတ်နဲ့ Samsung Galaxy S III ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြန့်ချိ
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ သေတ္တာဟာ မြင်လိုက်တာနဲ့တင် လုံခြုံရေးတော်တော်လေး အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်လုံခြုံရေး အဆင့်မြင့်တာ ဘာများထည့်ထားဒါလည်း စူးစမ်းလိုသူတွေ အံ့သြသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ အထဲမှာ ဟန်းဖုန်း​တွေထည့်ထားပါတယ်။ ထည့်ထားတဲ့ ဟန်းဖုန်းတွေကတော့ Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy ဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy SIII ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အင်္ဂလန်သို့ပို့စဉ် သတင်းမီဒီယာသမားတို့ စတီးသေတ္တာကြီးများအား မြင်တွေ့လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ဒီလောက်တောင် ဖုံးဖိထားရသလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နည်းပညာမူပိုင် မထွက်ချိခင် အခိုးခံရမှာစိုးလို့ ဖြစ် ပါတယ်။ အမှန်တော့ Samsung Galaxy SIII ထွက်ရှိမည့်နေက မေလ ၃ ရက်နေ့မှ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဝယ်ယူဖို့ တာဆူနေတဲ့ Galaxy ခရေစီများကတော့ store တွေမှာ ကြိုတင်မှာ ယူထားကြပါပြီ။ စတီးသေတ္တာကြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ပို့နေပါတယ် ဆိုတဲ့သတင်း​လေးကြားကြတာနဲ့တင် အထဲမှာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအရောင်လဲဆိုပြီး သတင်းမီဒီယာသမားများ အလုပ်ရှုပ်အောင်မေးမြန်းနေကြပါ ပြီ။ iPhone5သံသေတ္တာကြီး ရောက်လာဖို့တော့ နည်းနည်းလိုနေသေးတာမို့ Apple ခရေစီတွေ မျော်လင့်နေရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by patheinphonemarket at 6:14 PM No comments:
Posted by ရဲဂျာ on February 10, 2012 at 6:59pm in MoBile ချစ်သူများ
iPhone Explorer ၏ ဘယ်ဘက် ကကော်လံရှိ "Root Directory" ကို ရွေးပြီး ညာဘက် ကော်လံရှိ "System" folder ကို ဖွင့်ပါ။
အားလုံး စိတ်ကြိုက် ပြောင်းပြီးပါက "Save" လုပ်ပါ pop up message တက်လာပါက "Yes" ကိုသာနှိပ်ပါ။
ဖုန်းပြန်တက်လာပါက သင့်စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ထားသော မြန်မာစာသားလေးများနှင့် တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
အလွန်နှေးသောကွန်နရှင်ကို အံတုပြီး ပုံတွေကို တင်ပေးထားတာပါ။ ပြန်လည်ဝေမျှချင်လို့ပါ။
Posted by patheinphonemarket at 6:09 PM No comments:
http://www.myanmarmobileapp.com/?p=5831 ( မူရင်းလင့်ပါ)
Viber for iPhone အားရယူရန်..... ဒီဟာကလင့်လေးတွေပါ။ မူရင်းလင့်ကနေ ဒါလေးတွေကို သွားပြီးသာ ဒေါင်းကြပါနော်.
Viber for Android အားရယူရန်.... ဒီဟာကလင့်လေးတွေပါ။ မူရင်းလင့်ကနေ ဒါလေးတွေကို သွားပြီးသာ ဒေါင်းကြပါနော်.
Viber for Nokia အားရယူရန်....... ဒီဟာကလင့်လေးတွေပါ။ မူရင်းလင့်ကနေ ဒါလေးတွေကို သွားပြီးသာ ဒေါင်းကြပါနော်.
ဖုန်းစတင်ပြော၊ Message စပို့လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့သူငယ်ချင်းဆီမှာလည်း Viber ဆော့ဝဲသွင်းထားပြီး အခုလုပ်ခဲ့သလို Setup လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် သူ့နံပါတ်ကို Viber ထဲမှာ Invite လုပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ရုံပါပဲ။အင်တာနက်ဖိုးအနည်းငယ်သာကုန်မှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းခမကုန်ဘဲ ကြိုက်သလောက်ပြော ၊ ကြိုက်သလောက်
message ပို့လို့ရပြီပေါ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက သူတင်မဟုတ်ဘူး ၊နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပြောလို့ရပြီပေါ့နော်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Posted by patheinphonemarket at 6:08 PM No comments:
Sony Ericson မှာ မြန်မာဖောင့်ထည့်မယ်
Sony Ericson ဖုန်းကိုင်တဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ၀မ်းသာစရာ သတင်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ မတင်ဖြစ်တာ ကြာနေရောပေ့ါ။ သေချာလည်းကိုတိုင် မစမ်းရသေးတာလည်း ပါပါတယ်။ အင်း… ခုထိလည်း မစမ်းရသေးပါ။ www.mysteryzillion.org ရဲ့ forums မှာ ကိုစိုင်းညီဖြိုး ရေးထားတဲ့ မူရင်း အတိုင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ ဖိုရမ်ထဲမှာ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြလေးတွေ အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
iPhone/iTouch မှာတွေပဲ မြန်မာစာထဲ့တဲ့အကြောင်းပြောရတဲ့ အီလာပီ၊.. ဒီတစ်ခါ…….
ညကြီးမိုးချုပ် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့… အင်း…အင်း……. အဲ…
မမေးနဲ့တော့လေ.. topic မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ SE (sony ericson) ဖုန်းမှာ မြန်မာဖောင့်ထဲ့ထားတာလေးကို တင်ပြချင်လို့ပေါ့ဗျ.. ဟီးဟီ
အစောကြီး အစောကြီး… ဟိုးးး အစောကြီးကထဲက (လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လအလွန်လောက်ကပေါ့..)
nokia s60 ဖုန်းမှာမြန်မာစာယူနီကုတ်ဖောင့်ထဲ့ဖို့ အတွက်ကို အတော်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်.. (မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး..) ဖောင့်တွေပေါ်ပေမယ့်.. အရမ်းရွဲတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ အစ်ကိုတစ် ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ ဇော်ဂျီဆိုတာ ယူနီကုတ်မစစ်ဘူးဆိုလားပဲ.. နဂိုကထဲကမှ ကျတော် က အူကြောင်ကြောင်ဆိုတော့..သူပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပီး နားမလည်တာတွေကို နားမလည်သလိုပဲ နေလိုက်ရတယ်… အဲ့ဒီတုံးက ကောက်ချက်ချမိလိုက်တာက
ဇော်ဂျီသာ ယူနီကုတ်မစစ်ဘူးဆိုရင် Nokia မှာ မရတဲ့နည်းတူ၊ SE မှာဆိုလဲ ဒီအတိုင်းပဲပေါ့.. အဲ့ဒါကြောင့် ဆက်ပီးဘာမှ မကြိုးစားဖြစ်ခဲ့ဘူး.. ဟော…. မှားသွားပီ အကြီးအကျယ်မှားသွားပီ… ကျတော်လုံးဝကိုမှားသွားပီဗျာ… ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
ဒီနေ့မှ စလုံးက ဘော်ဘော်ကြီး တာယာ(၀ါ)ကြယ်စင် က သူ့ SE w995 မှာ ဖောင့်ပြောင်းချင်တယ်တဲ့.. အဲ့ဒါ နဲနဲကြည့်ပေးလို့ တောင်းဆိုလာတာနဲ့…
ကျတော်အစကတော့ ပြောလိုက်သေးတယ်.. တခြားဖောင့်ပုံစံတော့ ပြောင်းမယ်.. မြန်မာစာတော့ ကောင်းကောင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကို အတည်ပေါက် သူနဲ့ငြင်းလိုက်ရသေးတယ်… အဲ့ဒါကိုက ကျတော့အကျင့်လေ.. ထားပါတော့.. ဒီလိုနဲ့ပဲ တရုတ်ဆိုက်တွေမှာ ၀င်မွှေဖြစ်တယ် ဆိုပါတော့…
မသေချာတာကြီးကို ကျတော်စမ်းကြည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ်…. ဟားဟာ.. ခုတော့ အဲ့ဒီ မသေချာတာကြီးက ကျတော့မျက်စိရှေ့မှာ အပီအပြင်ကြီးကို မြင်တွေ့နေရပီ… ကဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
(ဆက်ဖတ်မည် / ခေါက်မည်...)
ဆိုင်က 2nd hand w595 လေးနဲ့ အလောတကြီး လုပ်လိုက်ရတာဆိုတော့ နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုပဲ တင်ပေးလိုက်တယ်၊ နောက်နေ့မှ သေချာလေး ကြားထဲက လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေကို ပုံနဲ့တင်ပြပေးပါမယ်ဗျာ… ခုက တောင်ကြီးက ညီမလေးရဲ့ 3GS ကို JB လုပ်ပေးဖို့လာခဲ့တာ.. JB လုပ်ပီး မြန်မာဖောင့်ထဲ့ပေးလိုက်ပါ ဆိုတာနဲ့လေ..
(စကားမစပ် ကျတော့ရဲ့ asl က 17/m/mdy ဖြစ်ပီး မေးလ်လိပ်စာက sainyiphyo@gmail.com ပါ)
၃။ FileSystem Tool ကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ “C” key နှိပ်ပီး ကေဘယ်လ်နဲ့ join ဖို့ပြောလာပါလိမ့်မယ်.. သူပြောသလိုသာ လိုက်လုပ်ပါ၊ အဲ့ဒီအခါ Driver တောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊
ရမရသိချင်ရင်.. သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကို ဖုန်းထဲပို့ကြည့်လိုက်ပေါ့…. ဟီးဟီး..
A2 uploader Support လုပ်တဲ့ platform နဲ့ model တွေကိုလဲ တစ်ပါထဲတင်ပြအပ်တယ်…
Posted by patheinphonemarket at 6:07 PM No comments:
မူရင်းလင့် ( http://www.mmitpalace.com/profiles/blogs/phone )
ကျွှန်တော့်ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဝေမျှပေးလိုက်တာပါ။ ညီရှင်းသန့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုလို pfingo ,skype တို့လို့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ငွေအကုန်သက်သာတဲ့အပြင်.... အဲဒီဆော့ဝ်လ်ကဆိုဒ်တော်တော်များများမှာတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီဆော့ဝ်လ်ကိုဖွင့်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြတယ်။ ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်...ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ်ရတယ်...ဟန်းဖုန်း...တယ်လီဖုန်းတို့ရတယ်။ တကယ်လည်းစမ်းကြည့်ပါ။ အကျိုးတကယ်ရှိတဲ့အပြင် ဖုန်းအစစ်လို Contacts ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအသစ်ရှာ...ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အသံ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ချက်တာ..video(vzochat လို)ပါတယ်။ register လုပ်စရာမလို..spyware..virus လုံးဝမရှိစေရဘူး။ ဆော့ဝ်လ်ကအလကားပေးတာ(သားကအလကားမှယူချင်တာ..ဟီး)။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်..လျို့ဝှက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရရှိနိုင်တယ်။
ဆော့ဝ်လ်နာမည်က CQPhone ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါ။ 2.62 MB ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့မူရင်းဆိုဒ်က http://www.cqphone.com/ ပါ။ အခု version က 2.4 ပဲရှိပါသေးတယ်(လောလောဆယ်ကိုပြောတာ)။ မူရင်းဒေါင်းလုတ်လင့်က http://www.cqphone.com/cqsetup2404.exe မှာပါ။
Posted by patheinphonemarket at 6:02 PM No comments:
iPhone5အား Apple မှ စတင်ထုတ်လုပ်နေပြီဟု သတင်းမျာ...
စတီးသေတ္တာ ချိတ်ပိတ်နဲ့ Samsung Galaxy S III ကမ္ဘာတစ...
Skype အတွက်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ သွားကြည့်နိုင်...
စင်္ကာပှုရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းများကို SMS Message Free ပ...
Samsung Android Secret Code တွေပါ
Nokia Touch phone တွေမှာ မြန်မာစာ ထည့်ဖို့
ဟန်းဖုန်း တစ်လုံး ရဲ့ အသုံးဝင် မှု